Sarkaal sare oo ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay gobolka Hiiraan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sarkaal sare oo ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay gobolka Hiiraan
Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in habeenkii xalay deegaanka Luuq Jeelow lagu dilay madaxii howl-gelinta Xarakada Al-shabaab ugu qaabilsanaa gobolkaas, kadib dagaal qaraar oo halkaasi ka dhacay.
Sarkaalkaan oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Cali ayaa dilkiisa yimid kadib markii koox degaanka kasoo jeeda ay weerar xoogan ku qaadeen xarun ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan Xarakada Al-shabaab islamarkaana uu la socdday sarkaalkaasi la dilay.
Kooxdaasi ayaa sida la sheegay ka careysnaa dil ay Xarakada Al-shabaab kula kacday oday dhaqameed kasoo jeeda degaanka Luuq Jeelow oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Sarkaalkaan la dilay ayaa sida la sheegay Xarakada Al-shabaab ugu qaabilsanaa dhinaca howl-gelinta ciidamada Shabaabka ah ee ku sugan deegaanada gobolka Hiiraan, iyadoona sidoo kale sarkaalkaasi lala dilay laba kale oo ka mid ah Al-shabaab.
Sidoo kael, kooxdaasi ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay 3 nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Xarakada Al-shabaab, lamana oga ilaa iyo haatan meesha ay la aadeen.
Dhinaca kale, saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Hiiraan ayaan weli wax faah-faahin ah ka bixin dilka loo geystay sarkaalkaasi Shabaabka ka tirsan.
Si kastaba ha ahaatee, deegaano badan oo ku yaalo gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku sugan maleeshiyaad hubeysan oo si iskood ah isku abaabulay, kuwaasi oo kasoo horjeeda ciidamada ka tirsan Xarakada Al-shabaab ee ku sugan gobolkaas.